Hab-WZX kaawiyadeysatid ee aan xuduud lahayn Warshadaha Factory | Wanzhanxing Apparel
Wzx seatless carshiga warshadaha / soosaarka ah ee shaaca ka ah Taageerada Warqad / Qaababka Shabakada OEM / ODM / Jumlo hoose oo hoose moq. Accort Caadada Gaarka ah / astaanta.
Xargaha dharka dharka ah
Nabar kalkaalinta nuugista
Taahadaha hooyada oo dushooda & Camisole
Dharka waraaqda hooyanimada
Dharka maalinlaha ah
Jir umid ah
Dalxiis warshadeed VR
Guri > Kiis
WZX Furfurta Furfurta Mid-yar oo Staps Straars Straars Assier-ka
Haweenka halaaga ah ee xaga cihqa ah
Eeg sida macaamiisheena ay u qiimeeyaan alaabadayada
Wzx xamuul xamuul xamuul ah oo xamuul ah
Hab-WZX kaawiyadeysatid ee aan xuduud lahayn Warshadaha Factory
WZX aan xuduud lahayn nigis saaraha Factory waa aTop Shapewear Shirkadaha iyo Shirkado Shapewear Daad.
Tani waa video habka kaawiyadeysatid ah, shaqaalaha waa shaqo adag fadhiga kaawiyadeysatid ah.
Waxaan leenahay geedi muunad aad u aasaasiga ah ee naga soo saarka shapewear, nigis, activewear, iyo dhalmada.
Waxaan taageero adeega caadadii muunad sida design caadada iyo bixiyaan adeeg brand one-stop.
Ku adkaysanaya inay soo saarayo alaab tayo sare leh ka dhigaysa noo helitaanka guusha. Oo waxaan jeclaan lahaa inaan si aad u hesho guul aad la.
Custom AAD SAMPLE
Waa maxay Shapewear?
Fahamka Model Business ka hor inta aanu quusin qoto dheer, aynu marka hore eegno waxa shapewear waa. Kuwani waa sirwaalladii aasaas loogu talagalay in lagu sculpt ka mid ah tiradaasi. Alaabta noocan oo kale ah ka caawin qofka xidhan si aad u eegto rafcaanka waxay rabaan. Dadka qaarkood waxay door bidaan in ay tixraac dhar sida dhar aasaas. shirkadaha soo saarta shapewear Custom leeyihiin tiro balaadhan oo ah alaabta. Waxaad si toos ah uga soo saaraha ama si toos ah uga iibsan kartaa warshad. Ujeeddadu waa in ay soo iibsato in badan qiimo hooseeyo iyo iibin macaamiisha si aad u faa'iido ah. Iyadoo in, soo socda waa qaar ka mid ah waxyaalaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay in aad ogaato marka la bilaabayo ganacsi sida.
Raadi saaraha ah
Si aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa in ay si toos ah uga soo saaraha hesho shapewear. Sida xawaaladaha ah, ma laga yaabaa in aad leedahay miisaaniyad weyn. Tani waxay ka dhigan tahay in aad u baahan doontaa inaad shaqada la soo saaraha hooseeyo ugu yaraan si shapewear.
Sida macmiil, waxaa muhiim ah in la soo saaraha ah in uu leeyahay tayada socda shaqeeyaan:
• Iibiya kala duwan ee wax soo saarka oo tayo sare leh
• Good at Baakadaha caadadii
• Hayso istaraatijiyad maraakiibta si degdeg ah oo wax ku ool ah
• Qiimo u goynta tartan
WZX - Professional aan xuduud lahayn Factory saaraha
1. Waxaan astaysto waxyaabaha waafaqsan shuruudaha aad
2. Waxaan si deg deg ah ka dhigi kara baarka iyo samatabbixin 7 maalmood.
3. Waxaan astaysto logo ee aad band.
4. Waxaan astaysto midabo aad u ixsaan.
5. Waxaan ka dhigi kara wax soo saarka oo lagu daray-size la technology aan xuduud lahayn a.
6. Waxaan astaysto qaababka aad rabto.
habka wax soo saarka si Our aan xuduud lahayn kartoo
Awdidu Barnaamijyada Computer
SANTONI aan xuduud lahayn Machine
SANTONI aan xuduud lahayn Machine Workshop
3D Stereoscopic goynta
Wax tolidda Workshop
Factory Brand Service iyo Certification
-We aad bixiyaan xirfad one-stop online / adeeg ahaanayta brand offline.
Warshadda BSCI iskaashi la brand NILIT ah, qeybiyaha ah dun OEKO-TEX100 shahaado
Label lagu dhaqo
Logo Transfer Heat lagu daabacay
OPP ee Xidhmada kartoo
Professional aan xuduud lahayn saaraha, waxaad siisaa Healthy aan xuduud lahayn Life
Maxaa laga yaabaa in aad rabto in aad weydiiso
1: ka maxay waqtiga dhalmada aad?
waqtiga dhalmada waxay ku xiran tahay hababka maraakiibta. Sida caadiga ah waxay qaadataa 3-7 maalmood via UPS muujiyaan. 7-15 maalmood via express hawada. 60 maalmood via badda
2: waxaan soo booqan kartaa warshad?
Si diiran u soo dhawaynaynaa. Marka waxaan leenahay aad jadwalka, waxaan kuu diyaarin doonaan kooxda iibka xirfadeed si ay dabagal ku kiiskaaga.
3: ayaa maxay waqtiga aad keentay?
Markii ugu keentay qaadataa waxay ku xiran tahay tirada. Items in stock la diyaarin doonaa si ay markabka 24-48 saacadood gudahood. Waxyaabaha la diyaarin kartoo shixnad 15-30 maalmood oo shaqo gudahood.
4. Ha aad aqbasho OEM / ODM?
Waxaan ku siin karaan waxyaabaha OEM / ODM per shuruudaha aad! tirada ugu yar iyo qiimaha ay ku xidhan tahay shuruudaha aad.
5. Ma aqbali ahaanayta LOGO?
Waxaan aqbali karaan ahaanayta LOGO, MOQ: 1pc
Wejiga WzX Coptaphed Coper-ka ayaa injineer ah oo lagu muujiyey guntin qaabeynta si ay u jajabaan calooshaada. Naqshadeynta sare ee dhexda sare ayaa yareynaysa dhexda lagu abuurayo mashiinka caqabadaha jilicsan ee jilicsan. Qofka-qudhku wuxuu si buuxda ugu xardhay iyada oo aan lahayn book ama jillaab iyo isha aagga caloosha, sidaa darteed ku siinaya qalooca jilicsan oo kaa caawinaya inaad u muuqato dharka aad u weyn!
Jid-dheelitirka qaab-dheelka ee badhtamaha ah ee lagu daray Xeerarka kontoroolka aan la arki karin ayaa leh faa iidada kor u qaadista hoose iyo dhallaanka, inta ay ku kala furfuran yihiin caloosha, dhabarka, miskaha iyo bowdyaha iyo dumarka. Tani waa galka saxda ah ee jilicsan, gabal fudud.- Neefsasho oo raaxo leh maqaarkaaga iyo jirka meelaha ugu muhiimsan.- khafiif fudud& dharka xariifka ah = raaxada guud- Waxay dammaanad ka qaadaan khad aan muuqan oo muuqaalka ah.- Xadhiga lagu hagaajin karo ee lagula wareego sliders hore-Perfect Qaabka ayaa u xirta wixii koox ah oo leh xaashidan jirka ee dumarka.
Kuwani waa dib u eegis ku saabsan iibinta ugu fiican ee macaamiisheena (iibiya madal ee khadka tooska ah). Faallooyinka shanta xiddig ee ka soo iibsadayaasha ayaa marag u ah tayada badeecada iyo adeega kooxda ee aadka u wanaagsan.
Jidhkani wuxuu u muuqdaa mid yar, laakiin waxaa loo sameeyaa si gaar ah oo lagu soo dejiyo, oo ay ku jiraan links-ka sare ee 360-ka-heerka ah ee 360-ka-fool ka fool ah oo aan ka soo boodbooyin aaggaaga, oo ku siiya si jilicsan. Qalooc oo ka dhig inaad u muuqato mid aad u weyn dharka!Muuqaalkayaga qaabeeyayadeena qaabeeya jirkaaga adigoon ku dhicin badhankaaga, kaasoo kor u qaadaya naqshadeynta mesh ee dabacsan oo lagu bartilmaameedsado, oo kor u qaadaya qaabkaaga dabiiciga ah, oo kor u qaadaya silyouette adiga oo aan lahayn Halganka, si tartiib ah oo raaxo leh qaabeeya badhankaaga, taasoo ka dhigeysa inay u muuqato mid dhammaystiran, wareer iyo xoog badan.
WzX Saamiyada Gawaarida Gaarka ah ee Willeres-ka oo ah alaab-qeybiyeyaasha ciriiriga ah
Haweenkan-ka-leexashada dumarka ee dumarka ah waxay adeegsadaan naqshad farshaxan oo gaar ah 360 ° khafiif ah, oo raaxo leh, si raaxo leh, si raaxo leh, si raaxo leh oo aad u iloobi doonto inaad xidhnaysid inaad xidhnaysid xijaab ku habboon. Qaab-dhismeedka jirka oo buuxa ee lagu xidho dharka gurigaaga / boodhkaaga / dharkaaga adag / gogosha / jiirka, khadadka muuqda ee dharkaaga lama arki karo. Kordhinta adag ee cadaadiska iyo xakameynta caloosha, waxay ku siinayaan qalooc jilicsan.
Wzx xamuul xasaasiyadeed
Bras-naarkaan aan kala go 'lahayn ayaa laga sameeyay Nylon iyo Spandex. Dharku waa raaxo iyo jilicsan, oo si isdaba joog ah ula xiriir maqaarkaaga, raaxo la'aan, qandhada, cuncun, iyo xoqitaan la'aan.
Heerkulka jirka wzx
Xaashida xakamaynta ee raaxo leh oo lagu duubo barida, oo muujinaya lugaha dhaadheer ee sexy, naqshadeynta ka hortagga skid-ka ee gudaha, ka hortagga godka ka soo baxa kor iyo hoos. Dharkan aasaasiga ah ee aasaasiga ah iyo qaababka caloosha, caloosha, dhabarka, dhabarka, iyo bowdyaha.
Wzx seatless zacess jirka oo dhameystiran ee kajawaabisan soo-saareyaasha sawir-qaade
Macaamiisheenu waxay jecel yihiin sida ay u kooban tahay qaab-dhismeedkan oo dhameystiran oo ay fududahay in la isticmaalo. Dhar fidsan waxay bixisaa kaliya qaddarka saxda ah ee qaabeynta sareeya adigoon dareemin xasaasiyad. Kor u qaad oo xakameyso caloosha / dhexda si dabiici ah. Qaabka jirka ee adag ayaa lagu hayaa. Dhexdhexaadiyahayaga sareeya ee qaabeynta haweenka ee haweenka ayaa caajisaya jidhka iyo xakameynta jirka.
La xiriir iibka xxxxx